South Asia and Beyond: रिले अनसनको प्रहसनः शिक्षण अस्पतालमा त्रि वि को घृणित राजनीतिको अभिषाप
रिले अनसनको प्रहसनः शिक्षण अस्पतालमा त्रि वि को घृणित राजनीतिको अभिषाप
शिक्षण अस्पतालमा डा। गोविन्द के सी को अनसन अझै जारी छ । अनशनको पाँचौं दिन भएकाले डा के सी को स्वास्थ्य अत्यन्त नाजुक भएको छ भने सरकारले सधैंझैं लाचारी र अकर्मण्यता देखाइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रीको बोली बोलीमै सीमित रहन्छ भन्ने एकतिर पुष्टि भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले आन्दोलित चिकित्सकलाई भेट्न समेत जाँगर चलाएका छैनन् ।
साथै अस्पताल बन्दको विरोधमा भनिएको रिले अनसनको प्रहसन पनि जारी छ । डा। के सी लगायत आन्दोलित चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुको एजेण्डाबारे मिडियाले यथेष्ट ध्यान नदिएको भए र दिशानिर्देश कार्यक्रममा डा। के सी ले दिएको अन्तवार्ता युट्युबमार्फत् विश्वभर नफैलिएको भए रिले अनशनकारीहरुका कुरा पत्याउने मानिसहरुको संख्या पनि ठुलै हुन सक्थ्यो । उसो त अस्पताल खुलाउन भनेर गरिएको
निर्लज्जताको पराकाष्ठाः एमाले दलको खल्तीबाट नयाँ डिन बनाइएका डा. बाँस्कोटाका समर्थकले डा. के सीको तेजोबध गर्ने उद्देश्यले निकालेको पम्फलेट
उक्त कार्यक्रममा पनि कनिष्ठता, भ्रष्टाचार गर्ने क्षमता र दुस्साहस भएकालाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर कतै भनिएको छैन । तर हिजोको विज्ञप्तिमा आदरणीय प्रा। भनेर सम्बोधन गरिएका डा। के सीलाई अस्तिको पम्फलेटमा चाहिं बिरामी मार्ने काम गरेकाले अस्पतालले किन अझै जागिर दिएको छ भनेर आश्चर्य जनाउनुले त्यो आन्दोलनको स्तर र नियत के हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आन्दोलन विरोधी आन्दोलनको मुख्य सन्देश के हो भने देशको राजनीति जति कुरुप छ, संस्थाभित्रको राजनीति पनि त्यति नै कुरुप छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई त्रि वि अन्तर्गत राखिरहेसम्म विश्वविद्यालयलाई ठगिखाने भाँडो बनाएका राजनीतिज्ञ देखि प्राज्ञ भनिने तिनका कृपापात्रहरुबीच घमासान चलिरहने निश्चितजस्तै छ । समस्याको जरो त्यहीं छ र जबसम्म त्रि वि बाट यो संस्थाले स्वायत्तता पाउँदैन तबसम्म संस्था टाक्सिंदै जाने अनि पदाधिकारीहरु र तिनका कृपापात्रहरु मोटाउँदै जाने प्रक्रिया पनि रोकिंदैन ।
अब प्रश्न आयो डा। के सीको अनशनको । एक व्यक्तिको प्रयासले संस्था सधैंका लागि सप्रने भन्ने हुँदैन । तर पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार र ब्रम्हलुट खेपेर हामी बहुसंख्यक मानिसले त्यसलाई पचायौं र आफ्नै आँखाअगाडि संस्था धराशायी भएको हेर्न सक्यौं भन्दैमा के डा। के सी ले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक अधिकार हामीलाई छैन । कम्तीमा अबको चार वर्षकै लागि भए पनि उपरवाला राजनीतिज्ञको मुख नताकेर संस्थाको हितमा काम गर्ने सम्भावना बोकेको मानिस उचित प्रक्रियाबाट आयो भने त्यो नै संस्थाका लागि ठूलो राहत हुनेछ ।
भ्रष्टाचार गरेका खुमबहादुर खड्काको पक्षमा नाराजुलुसमा उत्रने मानिस त निस्के भने डा के सी को चरित्र हत्या गरेर राजनीतिमा स्कोर गर्ने र ससानो भीडमा घाँटी फुलाई फुलाई भाषणको अभ्यास गर्ने मानिसहरु निस्कनु कुनै ठुलो कुरा हैन । सकारात्मक कुरा यो छ कि डा के सी को त्याग र निष्ठा बारे बुझाउनुपर्ने मानिसहरु कमै भएकाले आन्दोलनको विरोधमा गरिएको आन्दोलनले बिरामीले दुख पाए भनेर गरेको विलापलाई गोहीका आँशूकै रुपमा लिन सहज भएको छ । साथै महाराजगन्जका स्थानीय वासीहरुको तर्फबाट बनेको दबाब समितिले समेत अस्पताल मातहत एउटा ब्यानरमार्फत् डा. के सीको मागहरु दोहोर्याउँदै आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष समर्थन गरेबाट आन्दोलनका विरोधी स्वार्थ समुहहरुको मनोबल गिरेको छ ।
Posted by Jiwan Kshetry at 11:00 AM